ရိုဟင်ဂျာ လေးထောင်ကျော် ဘာဆာချာကျွန်းထပ်မံပို့ဆောင်
၀၁ ဧပြီ၊ ၂၀၂၁
ပင်လယ်ထဲကကျွန်း ဘာဆာချာဆီကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲက နောက်ထပ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ လေးထောင်ကျော် ခြောက်ကြိမ်မြောက် ထပ်ပို့ဆောင်လိုက်ပါပြီ။ မြန်မာပြည်ပြန်ရေးမျှော်လင့်ချက် နည်းလာသလို ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာလည်း မီးဘေး မိုးများရေကြီးမြေပြိုတာလိုမျိုး သဘာဝဘေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီး အနာဂတ်မဲ့လာလို့ ဘာဆန်ချာကျွန်းကိုပဲ ပြောင်းရွှေ့သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာလို့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။ မိသားစုလိုက် ပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ကုတပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ်(၇)မှာ ခိုလှုံနေထိုင်သူ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ဦးအောင်မြိုင်ကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း သတင်းထောက် မဆုမွန် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးအောင်မြိုင် ။. ။ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ ဆဌမအကြိမ်မြောက် စခန်းအသီးသီးကနေ ၄ ထောင်လောက် သူတို့ခေါ်ယူသွားပါတယ်။ နေရာရွေ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မဆုမွန် ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီသွားကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက ဘယ်လိုပုံနဲ့ ဘယ်လိုမိသားစုတွေက သွားကြတာလဲ ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ သွားကြတာလဲရှင်။
ဦးအောင်မြိုင် ။. ။ ဒုက္ခသည်ဘယ်လောက်ဆိုတာက ဘယ်လောက်အကြပ်အတည်းနဲ့နေရတယ်ဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုတာ လူဦးရေအလွန်တရာကြပ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဒုက္ခသည်တွေက ကိုယ်နိုင်ငံကိုလည်း မပြန်ရဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလည်းရှောက်သွားနေရတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ခေါ်တာလည်းမရှိဘူး။ ဒီမှာ မျှော်လင့်ချက်လည်း မရှိတော့ဘူး။ မရေရာမသေချာတဲ့ဘဝနဲ့နေရတယ်။ ရွက်ဖျင်တဲနဲ့လည်း နေရတယ်။ ပြီးတော့ စားဝတ်နေရေးအစစအရာရာ ဒီမှာ ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ အဲလိုပဲ ရွေ့ပြောင်းနေတာပါ။
မဆုမွန် ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ အခုဟာ ဆဌမအကြိမ်မြောက်အသုတ်ပေါ့နော်။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဆုံရပ်လုပ်ပြီးတော့ ဘာဆန်ချားကျွန်းကို သွားကြတာလဲရှင့် ။ နောက်ဆုံးအခြေအနေပြောပြပေးပါအုန်း။
ဦးအောင်မြိုင် ။.။ သူတို့ကို စခန်းတာဝန်ခံကနေတဆင့် ရဲတို့ဘာတို့နဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ အိုကီရားကိုခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီကမှတဆင့် စစ်တကောင်းမြို့ကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီကတဆင့် သင်္ဘောနဲ့ ဘာဆန်းချားကျွန်းကို ခေါ်သွားတယ်။
မဆုမွန် ။. ။ ဘာဆန်းချားကျွန်းဆိုတာလည်း တော်တော်များများက စိတ်ပူကြတာပေါ့နော်။ လူနေဖို့အတွက် အန္တရာယ်များနိုင်တယ်။ အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောနေကြတယ်။ အခုသွားဖို့ပြင်နေသူတွေကော သွားကြသူတွေကော ဘာဆန်းချားကျွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုများ သိထားကြတာ နားလည်ထားကြတာရှိပါသလဲရှင့်။ ကိုအောင်မြိုင် တို့ကော ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲ။
ဦးအောင်မြိုင် ။. ။ ဘာဆန်းချားကျွန်းဟာ မိုးရာသီ မိုးဆောင်းရာသီမှာ ဒီသဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ ကျနော်က ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာဆန်းချားကျွန်းမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့် သွားနေကြရတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီမှာ နေရတာက ခက်ခဲတယ်။
မဆုမွန် ။. ။ အခုက မီးတွေဘာတွေလောင်ထားတော့ နေဖို့က အခက်ခဲရှိတော့ သူတို့အတွက်ကော ဘာတွေစီစဉ်ပေးထားကြသလဲ။
ဦးအောင်မြိုင် ။.။ WHO က စားနပ်ရိက္ခာပေါ့နော်။ ဆန်ရော ဆီရော ပဲရော ပေးတယ်။ ပြီးတော့ UNHCR က တော့ Shalter တို့ Hygiene တို့ ပေးတယ်။
မဆုမွန် ။. ။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဖက်က နေရပ်ပြန်ရေး ဘယ်လိုစိုးရိမ်ချက်ရှိလဲ။ ပြီးတော့ နောက်တခုက လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့အတွက်မှာရော ဘယ်လောက်အထိ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့သူတွေကို ဘာများပြောချင်ပါလဲ။
ဦးအောင်မြိုင် ။.။ ပထမတော့ ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ တစုံတခုတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီး အခြေအနေတွေကို စောင့်ဆိုင်းနေတာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း သူတို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအာဏာပိုင်တွေကို စာရေးပြီး ကျနော်တို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ ဒီမိုကရေစီတောင်းတဲ့သူတွေကို ကလေးရော အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားရော သတ်ပစ်နေတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ပိုကြောက်သွားတယ်။ ကျနော်တို့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က အခြေအနေကို သတိယစေတယ်။ စစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက်နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို မတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်နေတာကို ကျနော်တို့လုံးဝမပြန်ချင်ပါဘူး။
ပငျလယျထဲကကြှနျး ဘာဆာခြာဆီကို ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှထေဲက နောကျထပျ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှေ လေးထောငျကြျော ခွောကျကွိမျမွောကျ ထပျပို့ဆောငျလိုကျပါပွီ။ မွနျမာပွညျပွနျရေးမြှျောလငျ့ခကျြ နညျးလာသလို ဒုက်ခသညျစခနျးတှထေဲမှာလညျး မီးဘေး မိုးမြားရကွေီးမွပွေိုတာလိုမြိုး သဘာဝဘေးတှနေဲ့ရငျဆိုငျရပွီး အနာဂတျမဲ့လာလို့ ဘာဆနျခြာကြှနျးကိုပဲ ပွောငျးရှသှေ့ားကွဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျကွတာလို့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှကေ ပွောပါတယျ။ မိသားစုလိုကျ ပွောငျးရှနေ့ကွေတဲ့ နောကျဆုံးအခွအေနကေို ကုတပလောငျဒုက်ခသညျစခနျး အမှတျ(၇)မှာ ခိုလှုံနထေိုငျသူ စတေနာ့ဝနျထမျးတဦးလညျးဖွဈတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ ဦးအောငျမွိုငျကို ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး သတငျးထောကျ မဆုမှနျ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ ၃ဝ ရကျနမှေ့ာ ဆဌမအကွိမျမွောကျ စခနျးအသီးသီးကနေ ၄ ထောငျလောကျ သူတို့ချေါယူသှားပါတယျ။ နရောရှပွေ့ောငျးသှားတာဖွဈပါတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ ဟုတျကဲ့။ ဒီသှားကွတဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေ ဘယျလိုပုံနဲ့ ဘယျလိုမိသားစုတှကေ သှားကွတာလဲ ဘယျလိုအစီအစဉျတှနေဲ့ သှားကွတာလဲရှငျ။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ ဒုက်ခသညျဘယျလောကျဆိုတာက ဘယျလောကျအကွပျအတညျးနဲ့နရေတယျဆိုတာ တကမ်ဘာလုံးသိတဲ့အတိုငျးပါပဲ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံရဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးဆိုတာ လူဦးရအေလှနျတရာကွပျပါတယျ။ ဒီမှာ ဒုက်ခသညျတှကေ ကိုယျနိုငျငံကိုလညျး မပွနျရဘူး။ နိုငျငံရပျခွားမှာလညျးရှောကျသှားနရေတယျ။ ပွီးတော့ ပွနျချေါတာလညျးမရှိဘူး။ ဒီမှာ မြှျောလငျ့ခကျြလညျး မရှိတော့ဘူး။ မရရောမသခြောတဲ့ဘဝနဲ့နရေတယျ။ ရှကျဖငျြတဲနဲ့လညျး နရေတယျ။ ပွီးတော့ စားဝတျနရေေးအစစအရာရာ ဒီမှာ ဘာမှမြှျောလငျ့ခကျြမရှိဘူးဆိုတော့ အဲလိုပဲ ရှပွေ့ောငျးနတောပါ။
မဆုမှနျ ။. ။ ဟုတျကဲ့ရှငျ။ အခုဟာ ဆဌမအကွိမျမွောကျအသုတျပေါ့နျော။ ဘယျနရောတှမှော ဆုံရပျလုပျပွီးတော့ ဘာဆနျခြားကြှနျးကို သှားကွတာလဲရှငျ့ ။ နောကျဆုံးအခွအေနပွေောပွပေးပါအုနျး။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ သူတို့ကို စခနျးတာဝနျခံကနတေဆငျ့ ရဲတို့ဘာတို့နဲ့ လုံခွုံရေးနဲ့ အိုကီရားကိုချေါသှားတယျ။ အဲဒီကမှတဆငျ့ စဈတကောငျးမွို့ကို ချေါသှားတယျ။ အဲဒီကတဆငျ့ သင်ျဘောနဲ့ ဘာဆနျးခြားကြှနျးကို ချေါသှားတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ ဘာဆနျးခြားကြှနျးဆိုတာလညျး တျောတျောမြားမြားက စိတျပူကွတာပေါ့နျော။ လူနဖေို့အတှကျ အန်တရာယျမြားနိုငျတယျ။ အခကျအခဲတှရှေိနိုငျတယျလို့လညျး ပွောနကွေတယျ။ အခုသှားဖို့ပွငျနသေူတှကေော သှားကွသူတှကေော ဘာဆနျးခြားကြှနျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျလိုမြား သိထားကွတာ နားလညျထားကွတာရှိပါသလဲရှငျ့။ ကိုအောငျမွိုငျ တို့ကော ဘယျလိုသဘောထားရှိပါသလဲ။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ ဘာဆနျးခြားကြှနျးဟာ မိုးရာသီ မိုးဆောငျးရာသီမှာ ဒီသဘာဝဘေး အန်တရာယျကွောငျ့ အသကျပါဆုံးရှုံးနိုငျတယျလို့ ကနြျောက ပွောခငျြပါတယျ။ ဘာဆနျးခြားကြှနျးမှာ မဖွဈနိုငျတဲ့အခွအေနကွေောငျ့ သှားနကွေရတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီမှာ နရေတာက ခကျခဲတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ အခုက မီးတှဘောတှလေောငျထားတော့ နဖေို့က အခကျခဲရှိတော့ သူတို့အတှကျကော ဘာတှစေီစဉျပေးထားကွသလဲ။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ WHO က စားနပျရိက်ခာပေါ့နျော။ ဆနျရော ဆီရော ပဲရော ပေးတယျ။ ပွီးတော့ UNHCR က တော့ Shalter တို့ Hygiene တို့ ပေးတယျ။
မဆုမှနျ ။. ။ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှဖေကျက နရေပျပွနျရေး ဘယျလိုစိုးရိမျခကျြရှိလဲ။ ပွီးတော့ နောကျတခုက လကျရှိမွနျမာနိုငျငံကို ပွနျဖို့အတှကျမှာရော ဘယျလောကျအထိ ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ လကျရှိတာဝနျယူနတေဲ့သူတှကေို ဘာမြားပွောခငျြပါလဲ။
ဦးအောငျမွိုငျ ။. ။ ပထမတော့ ၂ဝ၂ဝ ရှေးကောကျပှဲအလှနျမှာ တစုံတခုတော့ဖွဈလာမယျဆိုပွီး အခွအေနတှေကေို စောငျ့ဆိုငျးနတောပေါ့နျော။ ပွီးတော့ စဈအာဏာသိမျးပွီး နောကျပိုငျး သူတို့က ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အာဏာပိုငျတှကေို စာရေးပွီး ကနြျောတို့ကိုချေါမယျဆိုပွောတယျ။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒပွ ဒီမိုကရစေီတောငျးတဲ့သူတှကေို ကလေးရော အမြိုးသမီးရော အမြိုးသားရော သတျပဈနတေယျဆိုတော့ ကနြျောတို့ပိုကွောကျသှားတယျ။ ကနြျောတို့ ၂ဝ၁၂ ခုနှဈက အခွအေနကေို သတိယစတေယျ။ စဈတပျက ရကျရကျစကျစကျနဲ့ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို မတရားသဖွငျ့အုပျခြုပျနတောကို ကနြျောတို့လုံးဝမပွနျခငျြပါဘူး။